Professional 10-1000kva Cwaka Uhlobo Diesel Generator Cwangcisa yoMvelisi kunye Factory ngqo | Uthandile
Izibonelelo zohlobo lwethu oluthuleyo lokuseta
1, uyilo ubungakanani compact ultra-ezincinane kunciphisa kakhulu indawo yokugcina izixhobo kunye neendleko zokuhamba kunye nokususwa namasiko. Isikhongozeli esinye se-40HQ singalayisha iiseti ezingama-40 ukuya kwezi-10 ukuya kuma-20kva.
I-2, ii-gensets zamkela itanki yamafutha aphezulu anyinyiswe ngaphakathi nangaphandle. Uyilo lwetanki ephezulu luhambelana nomgaqo womxhuzulane, sinokuqinisekisa ukuba umbhobho weoyile uhlala uneoyile ukuba kukho ioyile etankini. Ke sinokuqala ii-gensets kwangoko nangaliphi na ixesha ngaphandle kokukhupha umoya ngesandla, ngakumbi zilungele iiyunithi ze-ATS. Uyilo olwenziwe ngesinyithi lwangaphakathi lunokuthintela ukuvuza kweoyile yetanki, qiniseka ukuba i-oyile ayivuzi.
3, isekethe yenkqubo yolawulo yamkela uyilo isinxibelelanisi ezihlangeneyo. Xa inkqubo yolawulo isilele, susa nje ipaneli yolawulo yoqobo, emva koko ubeke endaweni yolawulo ipaneli entsha kwaye uqhagamshele ikhonkco elidityanisiweyo. Akukho sidingo sokujonga umgca wenkqubo yolawulo nganye nganye ngaphambi kokutshintsha iplagi.
4, omoya efihliweyo iswitshi imveliso yamkelwe imveliso yangoku ngamandla; Imveliso ethe ngqo yeswitshi somoya inokuyiphepha ingxaki yokuwelda ukusuka kwiposti yesiphelo kunye nentambo yokuqhagamshela ebangelwa kukugqitha ngoku. Uhlobo olufihliweyo lwebhokisi yamandla eyomeleleyo inokukuphepha ukwenzeka kweengozi zokuvuza emva kokuqhagamshela intambo, uvale kwaye utshixe ucango, ukuze ufezekise ukusetyenziswa kombane ngokukhuselekileyo.
5, uyilo AVR lwangaphandle endaweni kusombiwa iyunithi ukuvula ibhokisi umva alternator for replacement, ukuvula nje ucango endaweni AVR.
I-6, Kulula kakhulu ukugcina iinxalenye zentloko yesilinda se-injini kwaye ungeze ioyile ngokuyilwa kwewindows ephezulu. Ke akukho mfuneko yokuba singene kumatshini wokuvelisa ukwenza ulondolozo lweinjini, okanye ususe yonke indawo.
Okulandelayo: I-10-1000kva Isakhelo esivulekileyo soDizili soMbane oMiselweyo
UMZEKELO EP-13S EP-16S EP-20S EP-24S EP-30S EP-36S EP-50S EP-68S EP-80S EP-120S EP-200S EP-250S EP-300S
Inkulumbuso (KVA) 50Hz 16.25 20 25 30 37.5 45 62.5 85 100 150 250 312.5 375
Inkulumbuso (KVA) 60Hz 19.5 24 30 36 45 54 75 102 120 180 300 375 450
Ukuma kwamandla (KVA) 50Hz 17.88 22 27.5 33 41.25 49.5 68.75 93.5 110 165 275 343.75 412.5
Ukuma kwamandla (KVA) 60Hz 21.45 26.4 33 39.6 49.5 59.4 82.5 112.2 132 198 330 412.5 495
Inkqubo yamandla / i-COS
Ubungakanani 1750x750x800mm 2000X850X850 2240x850x980 2500x1000x1030 2850X1100X1200 2965x1100x1350 3400x1300x1580 3600x1300x1850
Ubunzima 480kg 540kg 580kg 730kg 815kg 900kg 1040kg 1215kg 1480kg 1720kg 2280kg 2735kg 2865kg
Umthamo weTanki 50L 50L 50L 50L 50L 70L 140L 140L 140L 140L 140L 140L 140L
Injini Lemveliso IIMPAWU, CUMMINS, KUBOTA, YUCHAI, FAWDE, YANGDONG, RICARDO njl
I-Alternator Brand IStamford, iMarathon, iMeccatle, iLoyoy-somer, iStanford yaseTshayina, ukuthanda kwakho njl.
Iphaneli yokulawula uphawu Ulwandle olunzulu, iComAp, iSmargen njl.
Ixesha lokubaleka (p / itanki) 8 @ umthwalo opheleleyo 6 @ umthwalo opheleleyo 4 @ umthwalo opheleleyo
Uhlobo loLwakhiwo UMZANTSI
Inqanaba lengxolo (@ 7m) 72
Ukuqinisekiswa kwe-ISO9001 EWE
Iqinisekisiwe i-CE EWE
Ijenali yokuThengiswa kweeNdawo eziNgezelelweyo